May 17, 2013 - Written by Editor
Kampala:-Sh. Bashiir Ahmed Salaad gudoomiyaha Hay,da Culumada Soomaaliyeed ahna Amiirka Jamaacada Ictisaam Bilkitaab wasuna iyo wafdi culimo ah ayaa socdaal dacwadeed ku gaaray magaalada Kampla ee xarunta dalka Ugandha. Sheekh Bashiir Ahmed Salaad ayaa waxaa halkaas si weyn ugu soo dhaweeyey culumada iyo ducaada ku sugan magaalada Kampala waxaana uu Sheekhu muxaadaro iyo tawjiihaad u jeediyey jaaliyada Soomaaliyeed ee ku shaqan magaalada Kampala.
Masjika Al-Tawxiid ayaa waxaa si weyn u soo camiray dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kampla iyaga oo ka faa,ideysanaya wacdiga iyo Dardaaranka culumada socdaalka dacwo ku gaaray magaalada Kampala.Muxaadardii ugu horey say ayaa waxaa ka jeediyey Masjidka Al-Tawxiid Sheekh Bashiir Ahmed Salaad waxaana uu cinwaan uga dhigay Sheekhu muxaadaradiisa سبيل النجاة ama dhariiqa lagu badbaado aduun iyo aakhiro.
Masjidka Al-Tawxiid ayaa waxaa si weyn u soo buuxdhaafiyey dadweyne tiro badan waxaana Sheekh Bashiir uu si weyn u qaadaa dhigay dariiqa lagu badbaadayo isaga oo u dardaarmay jaaliyada Soomaaliyeed in ay alle ka baqaan oo qof walba uu diyaarsado camal uu ku badbaado maalinta qiyaamaha ee danbe.
Sheekh ayaa sidoo kale muxaadaro u jeediyey dumarka waxaana uu muxaadaradiisa cinwaan uga dhigay نصائح للمرأة المسلمة .
wuxuuna aad ula dardaarmay Sheekhu gabdhaha Soomaaliyeed in ay bartaan sharciga alle si ay ubadkooda u barbaariyaan.
Halgan.net ayaa idiin soo gudbin doonta muxaadaraadka Sh Bashiir Axmed Salaad iyo culimada kale hadii ay na soo gaarto insha Allaah.